Nandar Lwin, Author at Lifestyle Myanmar - Page2of 214
မိန်းကလေးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ဓမ္မတာရာသီလာခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော သိကောင်းစရာ (၉)ချက်
ဓမ္မတာလာခြင်းက သဘာဝ ဇီဝဗေဒနဲ့ ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးက ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှရာသီစက်ဝန်းက ၂၈ ရက်ဖြစ်ပြီး သင့်ဟော်မုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ပေါ် မူတည်ကာ ၃ရက်ကနေ ၆ရက်အကြား ကြာပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း...
မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် စူပါအစားအစာ (၄)မျို
မုန်လာဥနီမှာ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ၊ ဗီတာမင် အေနဲ့ lutein တွေ ကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ဒီအာဟာရဓါတ်အားလုံးက သင့်မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုက အနီးမှုန်၊ အဝေးမှုန် (သို့) အတွင်းတိမ်ကဲ့သို့သော မျက်စိပြဿနာတွေကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒီအခြေအနေတွေက...
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ပေမယ့် အတူတူနေလို့မရဘူး – ဘာလုပ်ရမလဲ?
မင်းရဲ့နှလုံးသားက တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေချိန်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မင်းဟာ အနာကျင်ရဆုံးသော ရင်ကွဲနာကျခြင်းကို ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။ မင်း သူတို့ကို ချစ်ပေမယ့် မဖြစ်သင့်ဘူး၊ လက်တွဲလို့မရဘူးဆိုတာ မင်းသိပါတယ်။ မင်းရဲ့အချစ်ခံစားချက်တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်သလို မင်းနှလုံးသားထဲက တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဖျက်ပစ်နိုင်တဲ့...
အလိမ်အညာလေးတွေကို အဆက်မပြတ်ပြောနေခြင်းက သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးကို ဘယ်လိုပျက်စီးစေသလဲ?
ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ လိမ်ညာမှုလေးတွေကို အဆက်မပြတ်ပြောဖို့ ရွေးချယ်တဲ့အခါ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ထာဝရချိုးဖျက်ရုံသာမကဘဲ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိခိုက်စေပါတယ်။ အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း အမှန်တော့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသေးအဖွဲမုသားတွေကို ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ relationship...
သင့်ရဲ့ပါတနာနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက်
သင့်ရဲ့ပါတနာနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကို အခြားတစ်ယောက်က နားမလည်ပေးနိုင်ဘူး ၊ အမြင်မတူကြဘူးလား? ဒါကို စဉ်းစားနေရပြီး ဖြေရှင်းဖို့ အရေးကြီးနေရပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ခုခုလွဲနေပါပြီ။ ဒီအဆင်မပြေမှုမျိုးက သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ နှောင်ကြိုးကို သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။...
ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအရာတိုင်းက ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆဲလ်တွေကနေ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအထိ ကျွန်မတို့ရဲ့ လိင်အရ လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ မတူညီတဲ့ ဟော်မုန်းတွေရှိခြင်းကြောင့်သာမက ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆဲလ်တွေက DNA ကိုထူးထူးခြားခြားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့Gender က...
ခါးသေးသေးလေး ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက လူတစ်ဦးရဲ့ ခါးပတ်လည်ဟာ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ညွှန်ပြတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သေးသွယ်တဲ့ခါးက လူတစ်ဦးရဲ့ ဘဝအရည်အသွေးအပေါ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လွှမ်းမိုးမှုရှိပြီး စွမ်းအင်အဆင့်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ခါးအဆီလျှော့ချဖို့ ကျန်းမာသော...
ခါးနာရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၆)ချက်
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းနဲ့ အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးက ခါးနာဝေဒနာခံစားရစေတဲ့ အချက်တွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစွမ်းအစနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ခါးနာခြင်းလက္ခဏာတွေက အလွန်ကွဲပြားနိုင်ပြီး ကျောရိုးဧရိယာအတွင်း မအီမသာဖြစ်ခြင်းကို ဗဟိုပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဘဝအရည်အသွေးကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့...
သင့်ရဲ့ ရာသီခွင်လက္ခဏာပေါ်အခြေခံပြီး ရည်းစားဟောင်းကို သင်ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ?
လမ်းခွဲမှုကနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရှေ့ဆက်နိုင်မလား? ဒါမှမဟုတ် အဲဒါကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ခဏလောက် အချိန်ယူရသလား? ဒါကတော့ သင့်ရဲ့ ရာသီခွင်လက္ခဏာအရ လမ်းခွဲပြီးနောက် Ex ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံသလဲ? ဆိုတာပါ။ ၁။ Aries Aries တွေဟာ...
အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ယုံတမ်းစကား (၁၀)ခု
သွေးဆုံးခြင်းက ရာသီလာချိန်လိုပဲ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း ပမာဏ ကျဆင်းလာတဲ့အခါ၊ ပိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဖြစ်ပွားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ လက္ခဏာတွေကို စတင်ခံစားရပါက အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ဆီ သွားပြဖို့...